QAABKA FEDERAALIGA IYO MID AWOODUHU BAAHSAN - U-KALA-DOORIDDODA SOOMAALIYA
FG: Qoraagu qormadan waxa uu u gudbiyey Qaramada Midoobey
27-29 Nofeembar 2008, Nayroobi, Keenya.
Diyaariye Cumar Salaad Cilmi –Bsc (Hons.)
Mudane Nuur Xasan Xuseen, Rasíisul Wasaaraha DFKMG, Mudane Shariif Xasan Sh. Aadan, Guddomiyaha Golaha Dhexe ee Is-bahaysiga Dib-u-Xorraynta Soomaaliya, Sarakiisha UQ Midoobay, Qubarada iyo ergooyinkaa Soomaaliyeed ee Shirkan ka qaybgalaya, nabad iyo naxariistii Rabi korkiina ahaato!
Ma doonayo inaan ka hadlo soo-jeedintan dhinaceeda sharciga, waxaanse jeclahay inaan guud ahaan dul maro dhinacyadeeda taariikheed, dhaqan-bulshadeed, juqoraafiyadeed iyo siyaasadeed ee la xiiira soo-if-bixii afarta qaab-dawladeed ee ugu muhiimsan sida konfeedaraaliga, feederaaliga, qoqob-beeleedka iyo dawlad mideysan kuwaan oo ay ku dhaqmaan dalalka kala duwan ee dunidu. Waxaan kalo si kooban u
xusi doonaa waayo-aragnimadii Soomaaliya ee qaabka dawladda mideysan ee awooduhu ku urursanaayeen gacanta dawladda ee xilliyo kala gedisan soo jirtey, anigoo ugu dambaynta is-barardhigi doona qaab dawlad midysan ee awooduhu baahsan yihiin iyo midka feederaaliga ah iyo arrimaha labadan qaab dawladeed kasta kaabi kara ama ka hor-imaan kara.
Qaababka Dawladeed ee Muhiimka ah
Marka la eego aragtiyaha iyo dhaqanka siyaasadeed iyo sharciyadeed ee caalamiga ah, sida kor ku xusan waxaa waxaa jira afar qaab dawladeed ee muhiim ah sida Konfedereyshan, feedereyshan, qoqob-beeleed iyo qaabka dawlad mideysan ee dalalka dunidu ku soo dhaqmeen ama ku dhaqmaan maantaba. Sida aan ku arki doono bogagga soo socda qaababkan dawladeed waa natiijo ka dhalatay xaalado iyo duruufo taariikeed, jiqoraafiyadeed, dhaqan-bulshadeed, jinsiyadeed, afeeed, iyo diineed ee umadaha kala duwan. Ma jiro dal si sahlan oo xisaab la’aan ah u doortay ama iska caashaqay qaab dawladeed. Laakiin qaadashada afartan waxay ka dhasheen oo lama huraan ka dhigay xalaadaha iyo duruufaha kor ku xusan ee dalalkaa kala gedisani soo mareen ama mantaba ku sugan yihiin. Bal aan eego millicsangan taariikheed ee muujinaya sidii, markii iyo meelihii ugu horreeyey qababkani ka soo if-baxeen, looga dhaqmay, iyo horumarkii ay sameeyeen ayagoo la jaanqaadaya xilliyada iyo horumarka umadaha.
1.1. Qaabka Konfeedereyshanka
Konfeederashanku waa qaab dawladeed oo labo dawladood ama kuwa badan oo xor ah ay wada galaan heshiis sababo la xiriira baahi wax-wada-qabsi ganacsi, difaac, isu-soo-dhawaansho siyaasadeed iyo jiqorafiyadeed awgood. Waxay dhistaan guddiyo ama xoghayn guud oo ka shaqeeya danahooa is-weydaarka ah ayadoo dawlad walba ee konfeedereyshanka ka mid ahi haysato madaxbannaanideeda iyo qaranimadeeda – hoggaamiye qaran, gole sharci-dejin, ciidan, lacag, calan iyo dhal-ku-gal.
Haddii aan taarikhda dibu-jaleecno konfeedreyshanada badankoodu waxay ka soo if-baxeenYurub iyo Ameerika sida Goboladii Mideysnaa ee Nederlaand (konfeedereyshanka ahaa) ee jirey 1579 -1795; Konfedereyshankii Switzerland ee jirey 1789 1848; Bund (konfeedereyshan) Jarmalka ee jirey 18815 – 1866 iyo Konfeedereyshankii Ameerika ee jirey 1781 – 1789 (1). Ugu dambayntii is-bedello waqtiga iyo tadawirku keenay dartood, konfeedereyshanadani waxay isu bedeleen feedereysahan (matalan Maraykanka, Jarmalka) iyo Swizterland oo dooratay qoqob-beeleed – qaab konfedereyshan dabacsan oo dawladda dhexe awoodeedu yar tahay iyo gobollo lagu magacaabo qoqobyo (cantons) ku kala duwan jinsiyad, dhaqan, af iyo diin oo hayta madaxbannaanidooda iyo awoodaha inta badan; iyo Nederland (Holland) oo isu bedeshay dawlad mideysan awooddu baahsan tahay. Afrika marka aan eego hal konfeedereyshan oo dhicisowday ayaa ka dhex dhalatay Senegaal iyo Gaambiya 1980maadkii. Aasiya, Bariga Dhexe iyo Laakiin Ameerika ma jirin wax Konfeedereyshan ah ee ka soo if-baxay.
Konfeedereyshanadaas kor ku xusan xilliyadaas waxay ahaayeen kuwo dal gudihiisa ka jirey laakiin maanta kuwa casriga ah ee jiraa waa heer caalamiyeed, qaaradeed, iyo gobolleed sida Ururka Qaramada Midoobay, Ururka Islaamka, Ururka Dawladaha Ameerika, Midowga Afrirka, Midowga Yuurub, Ururka Assiyada Koonfur-bari, Jaamacadda Dawladaha Carabeed, ama IGAD ee Geeska Afrika kuwaas oo ujeedada loo aasaasay tahay wax-wada-qabsiga iyo isu-duwidda arrimaha dhaqaalaha, bulshada, nabadgelyada iyo farsamada.
1.2. Qaabka feedereyshanka
Qaabka feedereyshanku waa mid awooddu aad u baahsan tahay ee dawlado ama gobollo madaxbannaan ay ku heshiiyeen inay dhistaan dawlad iyo hayado feederaaliga ee ay wadaaagaan ayagoo awoodaha qaar ama intooda badan la haraya. Dawladda Feederaaligu waxay inta sida badan ku dhisan tahay ‘qaab jiqoraafiyadeed oo leh awoodo la qaybiyey iyo damaanado la siiyey qaybaha ka tirsan.’ (2) Dawladda feederaaliga iyo qaybaha ka mid ah sida ay awodadaha iyo masulliyadaha u kala-qaybsadaan iyo damaanadaha la xiriira waxaa lagu qeexaa dastuurka. Sida badan, awoodaha iyo masuuliyadaha dawladda dhexe ee federaaliga ah waxaa ka mid difaaca iyo nabadgelyada qaranka, siyasadda dhaqalaha iyo lacagta, dejinta manhajka wax-barashada sare, arrimaha muwaadinnimada iyo socdaalka, calaamadaha qaranka (sida calanka, gaashaanka qaranka, dal-ku-galka), iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Dawladaha ama gobollada ka tirsan feedereyshanka ayaguna waxay yeelanayaan awooddo ay ku maamulaan ganacsiga iyo dhaqaalaha, wax-barashada, caafimaadka iyo nabadgelyada ee gudahooda. Qaybahani waxay leeyihiin awooddo ay ku dejiyaan sharci, doorashada hoggaamiyayaashooda, uruurin canshuur iyo maamulidda misaaniyadooda ayagoo isla markaa awood u leh inay dib uga noqdaan heshiiskii lagu dhisay feedereyshanka haddii loo baahdo.
Haddii aan soo qaadano inta muhiimka ah, maanta dunida waxaa ka jira 15 dawladood ee federal ah oo keliya. Qaaradda Ameerika waxa ka jira saddex kuwaas ah Brazil, Canada, Mexico iyo USA; Yurub waa 5 – Belgium, Gemany, Russia, Bosnia-Herzegovina iyo Switzerland - labada dambe waxay ku dhisan yihiin qaab qoqobada-beeleed (consociation) oo qawmiyado kala duwan ay kala ku dhisan kuwaas oo awoodda iyo jagooyinka sare ee feederaliga beel ahaan ku kala qaybsada ama ku meertaysta; hal feedereyshan ee ka jirta Austraaliya. Afrika waxaa 1960maadkii qaatay qaabka feedereyshanka dalalka Cameroun, Nigeria, iyo Uganda waxaase ka noolaaday midda Nigeria. 1994kii Ethiopia waxay qaadatay qaabka feederaaliga oo ku sallaysn qawmiyado kala gedisan. Labadan feedereyshan ee maanta ka jira Afrika waa kuwo jilicsan ee aan weli xididaysan. Aasiya labo dalal – India jirey iyo Malayasia ayaa qaatay feedereyshan kuwaaso weli xisado qowmiyadeed iyo diimeed gilgilayaan. Bariga Dhexe Masar iyo Suuriya waxay 1958dii ku heshiiyeen feedereyshan lagu magacaabi jirey Feedereyshanka Jamhuuriyada Carbeed kaasoo burburay 1961kii. Mar kale 1971kii Masar, Libiya iyo Suuriya waxay qaateen feedereyshan kaasoo kala daatay 1973dii. Maanta Bariga dhexe waxaa ka jira hal feedereyshan ee boqortooyo ku dhisan taasoo ah Federeyshanka Imaaraadka Carbeed. Laakiin waxaa jira dalal ka kooban qowmiyado leh jinsiyado, dhaqamo, afaf iyo diimo kala duwan oo doortay qaabka dawladda mideysan halkii ay ka qaadan lahaayeen feedereyshan sida Ingiriiska, Keenya, iyo badan oo kale..
Marka la soo koobo waxaa jira 15 dal ee federal ah (qaaradda Ameerika 4 ), (Yurub 5), (Aasiya 2), (Afrika 2), (Austraaliya 1) iyo (Bariga Dhexe 1) kuwaasoo 29% ka noqonaya 195 dal ee dunida ka jira.
Qaabka qoqob-beeleedku waa nooc feederaaliga ee dabacsan oo ay ku heshiiyeen qowmiyado ku kala duwan jinsiyado, afaf, diimo iyo dhaqamo. Ujeedada qaadashada noocan feederaaliga waxaa loogu talo galay in khilaafka iyo tartanka xooggan ee ka dhexeeya jinsiyadan lagu hayo heerkooda ee laga illaaliyo inay saamayn ku yeeshan heerka dawladda dhexe ee feederaaliga taasoo ay hoggaamiyaan siyaasiyiin bisil oo horseed ah oo laga soo doortay heerka qoqobada beeleed ee kala gedisan sida Switzerland. Dalkan, matalan, wuxuu ka koobmaa jinsiyado badan ee leh afaf, diimo iyo dhaqamo kala (Jarmal, Fransiis, Talyaani, i.k.k.) waxaan hoggaaminaya feedereyshankan gole sharci-dejineed iyo gole fulineed ee wadareed ee laga soo wakiishay qoqobadaas beeleed ee loo yaqaan kantoons (cantons) ayadoo wakiilada gole fulineed wadareed ee matalaya qoqobada ay meertaystaan jagada madaxweynaha sannad walba.
1.4 Qaabka dawladda Mideysan
Qaabka dawladda mideysan waa midka aasaasiga ee muhiimsan uguna horreeyey taariikhda dawladnimo waana midka tiradada ugu bandan dawladaha dunidu maanta ku dhaqmaan. Waxaa jira ugu yaraan afar nooc oo dawlad mideysan ah: b) nooc awoodaha oo idil gacanta ugu jiraan dawladda dhexe kaasoo noqon kara boqortooyo keli-talis ah, ama dawlad ciidameed keli-talis ah, ama mid rayad ee xisbi keliyaha ee keli-talis ah (sida Soomaaliya 1969-1991); t) nooc ku dhaqma dimoqoraadiyada liberaaliga ee awoodaha badankoodu gacanta ugu jiraan dawladda dhexe laakin awoodo yaryar u oggolaada dawladaha hoose (sida Soomaaliya 1960-1969); j) nooc ku dhaqma siyaasadda dimoqoraadiyada liberaaliga ee go’aan-qaadasho iyo awoodo doora u ogolaada gobollada iyo degmooyinka si ay u maamushaan arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada ee heerkooda sida Holland, Ingiiriiska, iyo kuwo badan oo kale; iyo x) iyo nooc afraad oo ku dhaqma dimoqoraadiyad liberaali ah oo dhiman ama buuxda isla markaana ku dhisan qoqobyo diineed (religious confessionalism) sida Lubnaan oo bulshooyin haysta diimo kala duwan ay leeyihiin awoodo ay isu-maamulaan laakiin jagayooinka sare ee dawladda dhexe lagu kala qaybsado hab la xiriira diimaha kala gedisan – matalan madaxweynaha waxaa qaata Kirishtaanka, Ra’isul wasaarahana Muslimka Sunniga ah, halka Muslimka Shiicadu qaataan guddoomiyaha golaha sharci-dejinta.
Waayo-aragnimadii Soomaaliya ee Qaabka
Dawladda Mideysan iyo Eelka Dagaalka Sokeeye
1960kii kadib qaadashadii gobanimada, qarankii cusubaa ee Soomaaliya wuxuu qaadatay qaab dawlad mideysan ee awooddu ku uruursan tahay gacanta dawladda dhexe kuna sallaysan siyaasada dimoqoraadiyada liberaaliga ee reer galbeedka. Laga bilaabo waqtigaas, qaranka Soomaaliyeed wuxuu soo maray saadex xilli ee kala duwan marka la eego qaabka iyo nuuruka dawladda mideysani ama dawladda la’aanta. Xilligii 1960 -1969kii mid qaab dawladd mideysan ee dimoqraadi liberaaliya ee awoodda badankeedu ku jirtey gacanta dawladda dhexe. Xilligii 1969-1991kii wuxuu mid qaab dawlad ciidameed ee mideysan ee keli-talis ee ku dhisanayd siyaasad hanta-wadaag ah ee awoodda oo idil gacanta ugu jirtey dawladda dhexe. Labadaas nooc qaabka dawladda mideysani waa fashaleen, sababaha ugu waayenina waxay ahaayeen awoodda oo gacanta dawladda ku urursan, xorriyaada shaqsiga ama kuwa siyaasadda ee yaraa ama aan jirinba, caddaalad-darro, iyo musuq- maasauq. Qaababkaas dawladda mideysan ee fashalay waxaa ka dhashay xilli Ummadda Soomaaliyed ku sugnayd (welina ku sugan tahay) dagaal sokeeye ee naf iyo maalba lagu hoobtay, fawdo, iyo qaranjab, isla markaana ay soo if-baxeen xoogag u taagan dumin iyo kala-qaybin ummadda (1991- ilaa maanta). Boggagga soo socda waxaan si kooban ugu eegayaa xiliyadaas iyo natiijadoodii.
2.1: 1960-1969kii Xilli Dawlad Mideysan ee Liberaali
Dimoqoraadiya ee Awooddu Uruursan Tahay
Laga bilaabo 19960kii ilaa 1969kii Soomaaliya waxay ku dhaqmeysay qaab dawladda mideysan ee awooddu ku uruursan tahay dawladda dhexe siyaasadeeduna ku sallaysnayd dimoqoraadiyada liberaaliga lagu qeexay dastuur lagu ansixiyey afti dadweyne ee qarameed 19961kii kaasoo rukumada mabaadiisu ay ka mid ahaayeen:- b) qaab dawlad mideysan ee awooddu urursan tahay oo leh saddexda qaybood ee dawladdeed ( Sharci-dejin, fulin, iyo garsoor); t) xorriyaadka iyo waajibadka muwaadinka; j) hayadaha tiirarka qaranka sida shaqaalaha adeeegga rayadka ah, booliska, ciidanka xoogga dalka iyo maxkamadaha garsoorka kuwaas oo, ugu yaraan mabda’ ahaan, ku dhisnaa hannaanka mudnaanta ee tixgeliya aqoonta, kartida iyo dhexdhexaadnimada; x) doorshayooyin guud ee xor iyo caadil ah mabda’ ahaan kuwaas oo la qaban jirey afartii sanoba mar ayadoo muwaadiniintu soo dooranayaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee ay u wakiishaan maaraynta siyaasadda iyo maamulka qaranka ; kh) gobollo iyo degmooyin maamuleed ee ku sallaysan qaab-dhuleed (territorial form) ee ay madax ahaayeen guddoomiyeyaal gobol iyo degmo dawladda dhexe u magacaabi jirtey ayadana hoos imaan jirey, muwaadaniintuna ayna la xisaabtami karim, iyo d) dawlado hoose ee magaalo ee ay madax ka yihiin duq iyo gole magaalo oo maamula arrimaha magaalada kuwaa oo saddexdii sanoba mar la soo doorto lahaana awoodo aad u kooban sida uruurinta canshuuro yaryar ee suuqyada furan iyo waraatada, kawaanada (xero-dhiigyada), ruqsadda (laysanka) dukaamada iyo makhaayadaha, diwaangalinta qoyska iyo deggenayaasha magaalada, lambarrka guryaha, i.w.m. si ay ugu bixiyaan mushaarka shaqaalaha dawladda hoose iyo adeegayada guud ee magaalada sida nafaadda, fayo-dhawrka, i.k.k. Xilligaas siyaasadda dimoqoraadiyada liberaaliga lagu dhaqmaayay waxaa jirey dhaqaalaha suuqa xorta ah ilaa heer. Qaabkan dawladda mideysan ee liberaaliga ahi ilaa xad si wanaagsan buu shaqeeyey lixdii ilaa todobadii sano ee ugu horrey (1960 -1967). wqtigaa kadiba waxaa hannaankii dawladeed soo dhex galay qabyaalad, qaraabo-kiil, iyo musuq-maasuq cuduradaas oo ugu dambayntii keeneen hoos-u-dhac bulsho-siyaasadeed iyo dhaqaaleed oo abuuray niyad-jab dadweyne iyo doonis is-bedel siyaasadeed.
2.2: 1969 – 1991kii Xilli Dawlad Mideysan
ee Kacaan iyo Kali-talis ah
Ayadoo ay ka faa-iideysanayaan xaaladdii bulsho-dhaaqaleed, walaacii siyaasadeed niyad-jabkii dadweynaha ee dalka ka taagnaa, iyo dilkii Madaweyne Cabdirashid Cali Sharmaarke 15kki Oktobar 1969kii kaasoo sii kordhiyey walalkii iyo jahawareerkii, ayaa Xooggii Dalka Soomaaliyeed (XDS) afgambi kula wareegay awooddii siyaasadeed ee dalka 21kki Okoobar 1969kii waxaana ayadoo xilkii garabka saartay Gole Sare Kacaneed (GSK) ee ka koobanaa 25 sargaal ee uu hoggaaminayey taliyihii XDS Sarre Gaas Moxamed Siyaad Barre, golahaas oo qaaday tallaabooyinkan soo socda:-
Tallaabadii kowaad: laalid dastuurkii dimoqoraadiga ahaa ee dawladdii rayadka ahayd iyo hayadeedii sare ee siyaasadda iyo garsoorka (sharci-dejin, fulin iyo garsoor), xisbiyadii siyasaadeed yo ururadii shaqaalaha, xirfadaha iyo kuwii bulshada ee madaxa bannaanaa iyo xorriyaadkii shaqsiyeed iyo siyaasadeed. Talaabadii labaad: ku-dhaqaaqid iyo ku dhaqan habka siyaasadeed ee loo yaqaan hantigga cilimga ah ama shuuciyadda. Tallaabadii saddexaad: hirgalin siyassad qaramayn ballaaran ee qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha, maaliyadda iyo adeegyada (sida ganacsiga dhoofinta iyo soo-dejinta, warshadaha, bankiyada, caymisyada, dhulka, i.w.m.) iyo olole baaxad leh ee kicin iyo abaabul imkaaaniyaadka ama awoodaha maadiga iyo kuwa aadaminga ah ee dalka ayadoo la adeegsanayo mabaadiida isku-kalsoonida, iska-wax-qabso iyo isku-filnaanshaha si loo abuuro loona hirgaliyo barnaamijyo iyo mashaariic horumarineed ee dhinacyada dhaqalaha, bulshada iyo kaabayaasha. Ujedeeduna waxay ahayd kocbinta iyo kor-u-qaadista wax-soo-saarka beeraha, kordhinta iyo ballaarinta adeegyada guud sida caafimaadka, nabadgalyada iyo cadaaladda, shaqo-siin tobanaal kun ee qof, wax-barashada iyo ciribtirka jahliga ayado markii ugu horreeyey la qoray far-Soomaaliga, lana qaaday ololeyaal ballaaran ee is-daba-joog miyi iyo maagalaba. Xilligaan lixdii ama ilaa todobadii sano ee ugu horreysay (1969-1976) waxaa dalka laga hirgaliyey is-bedello cusub ee kacaaneed ee keenay horumar ballaaran ee bulsho-dhaqaaleeed, isku-dheeli-tir miisaaniyaddii qarameed ee hungada ahayd, bixin deymankii caalamiga iyo kor-soorkoodii joogtada ahaa, buuxin sharuuddii saamiga dahabka ee dalka u yaal Sanduuqa Lacagta ee Caalamiga ah ‘IMF’, iyo dalka oo loo yaqiinnay ‘Qabriga Mucaawinada’ ee magaciisii iyo sharaftiisii soo noqdeen.
Hayeeshee, taliskii ciidameed wuxuu marba marka ka dambeeya sii luminayey awoodiisii kacaaneed, dareeneedkii waddaniyadeed, iyo kalsoonidii dadweynaha, asagoo adeegsanaya siyaasadaha iyo falalka soo socda ee burburinayey horumarkii la gaaray: b) faragelin iyo cirriin kor-dhaysa ee nolosha guud iyo tan gaar ee bulshada iyo daba-gal iyo cadaadin xad-dhaaf ah muwaadaniyiinta la dul saaray; t) burburin hannaanka mudnaanta ee aqoonta, kartida iyo dhexdhaadnimada ku dhsinaa ee hayadaha tiirka qaranka sida shaqaalaha adeega rayadka, booliska, xoogga dalka, iyo garsoorka ayadoo shaqalahiii iyo saraakiiisha sare ee hayadahaas badankoodii laga sifeeyey shaqadii dawladda laguna eedeeyey kacaan-diidnimo iyo daacad-xumo laguna bedelayo kuwo aan aqoon iyo karti ee qabyaaladeed iyo dabadhilifnimolagu aaminay; iyo j) musuq-maasuuqii, qaraaba-kiilkii iyo qabyaaladii oo ka darnaaday heerkii dawladdii hore ee rayadka ahayd. Cuduradaan natiijadoodii waxay wiiqay oo dumisay dhaqaalahii iyo adeegyadii guud ee dalka, waxaana bilawday shaqo la’aan ballaaran, qiimo-dhac heerkii ugu xumaa oo qiimihii shillinka Soomaaliga dhulka dhigay iyo sicir-baraar faraha ka baxay kuwaasoo tirtiray ama eber ka dhigay mushaarooyinkii shaqaalaha iyo dhaqliyadii kale dadweynaha iyo xaaladdii nololeed gaar ahaan kadib dagaalka 1977-1978dii ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Xaaladdan ba’an waxay abuurtay caro iyo mucaaradnimo dadweyne ee qoto-dheer oo baahsan taasoo kalliftay in dadwenuhu dawladda ku kaco oo hubka qaado dabadeedna sababay riditaankii dawladdii dhexe 1991kii iyo qaran-jab ku dhaca ummadda Soomaaliyeed. Mucaraadka hubeysani wuxuu ahaa mid u kala qaybsan koooxo qabiil, waxayna awoodi kari waayeen inay ku heshiiyaan dhisme dawlad qarameed. Fashalkaana waxaa ka dhashay dagaal sokeeye ee ba’an oo naf iyo maalba lagu hoobtay, burbbur, dawlad la’aan , iyo qaran-jab, iyo ummaddi oo bulsho iyo dhul ahaan kala qaybsantay xaaladdaas oo weli maanta taagaan.
2.3: 1991kii Ilaa Maanta Waa Xilli Dagaal Sokeeye
iyo Xooggag u Taagan burburin iyo kala-qaybin
Nasiib-darro 1991kii ilaa maanta waa xilli taariikhda Soomaaliya ay gashay mugdi kuna astaamaysan dagaal sokeeye iyo xoogag u taagan burburin iyo kala-qaybin ee gudaha ka soo if-baxay kuwaas oo keenay burburin, xasuuq, masiibo bini-aadameed, qaaran-jab iyo ummaddii dullinimo una nuglaatay Ummadda Soomaaliyeed duuulamo gumeysiyeed iyo faragalin ee xooggag shisheeye u tartamaya danahooda. Eelkaa kaarka badan ee Ummadda soomaaiyeed soo martay xilligan ama weli ku jirto waxaa lagu soo koobi karaa sidatan:
b) goosiga iyo ku-dhawaaqa gobolada Waqoyin dawlad gaar ee lagu magacaabo Somaliland 1991kii;
t) Gobolada Waqooyi-bari oo dhistay dawlad gobolad lagu magacaabo Puntland 1998dii taasoo doonaysa in Soomaaliya qaadato qaab federaali ah;
j)Beelaha Digile iyo Mirifle ee dhistay labo gole madaxbannaan 1995kii maamulkaa oo burburay1996kii iyo RRA (ciidanka Iska-Caabinta ee Rahaweyn) dhistay maamul lagu magacaabay Dawladda Goboleed ee Koonfur-Bari 2000 kaasoo dhicisoobay, goboladaas uu doonaya qaabka federaaliga;
x) Dadweynha degga Koonfur Mudug iyo qayb ka tirsan Gobolka Galgudug oo dhisaty maamul lagu magacaabo Dawlad Goboleedka Galmudug 2005 ee aan caddayn qaabka dawladeed ee uu doonaya in Soomaaliya qaadato;
kh) gobollada koonfurta iyo bartamaha ee weli ku sugan qaabka gobolada maamuleed ee dawladdii hore laakiin ku abaaday qalalaaso iyo fawdo joogto ah oo hoggamiye kooxeedyo hurinayeen marka laga reebo mudadii lixda bilood ahayd ee 2006dii ee Golaha Midowga Maxkamadaha Islaaamiga (GMXI) nabadgalyada iyo nidaamka lagu naalooday ka hirgaliyeeen Caasimadda Muqdisho iyo gobolada koonfurta iyo bartamaha kadib markay ka adkaadeen hoggamiye kooxeedyadaas ummadda kadeedka ku hayey mudada 16ka sano ah, xukunkaas GMXI oo ay afgambiyeen ciidamadii Itoobiya dalka ku soo duulay Diseembar 2006dii ayagoo sida sheegeen taageeraya Dawladda Feederaaliga Ku-Meel-Gaarka (DFKMG) kaana difaacya ciidamadii GMXI;
d)DFKMG ee Keenya lagu dhisay 2004tii oo qaadatay ‘Axdiga federaliga ee KMG’ ayadoo xoogag shisheeye ku sanduleeyeen iyo awood-darrada DFKG ee xukunkeeda gaarsiisiin weyday qaybaha dalka ee kor ku xusan iska dhaaf hannaan federaali ah inay hirgaliso; iyo r) ayadoo Moqdisho iyo qaybo kale ee dalka ay ka jiraan faragalin iyo haysasho ciidamado shisheeye oo taageeraya DKMG lana dagaalamaya xooggaga gumeysi-diidka iyo dib-u-xorraynta dalka iska-horimaadyadaas oo dhaaliyey ‘xaaladdi bini-aadameed ee ugu xumayd adduunka’ sida UQM caddeeyey sannad iyo bar ka hor iyo aydoo xaaladdaasi dhalisay burbur, barakac, kacdoon iyo caro dadweyne ee aan hore loo arag..
Is-barbardhig Qaabka dawladda Mideysan iyo Kan
Fedeeraaliga ayadoo lagu eegayo Xaaladda Soomaaliya
Laga bilaabo 1991dii markii ay dawlad la’aanta iyo qaran-jabku ku dhacay, Soomaaliya ma lahayn dawlad dhexe iyo qaab dawladeed ee la garan karo magac mooyee. Ilaa waqtigaas waxaa hawada ku jirtey ee meeraysanaysay su’aashan ‘haddii Soomaaliya ku fashashay qaabka dawladda mideysan ee awooddu uruursanayd, muxuu noqon kara qaab dawladeedka ku habboon ee ay ku dhaqmi kartaa?, Hase ahaatee, marka meel la iska dhigo ‘Axdiga federaaliga ee KMG’ ee ay qaadatay dawlad aan dadweyuhu soo dooran, mushkilada jirety waxay ahayd in aynan marnaba dhici kullamo rasmi ah ama aan rasmi ee aqoonyahanada, siyaasiyiinta, garyaqaanada, i.w.m. inay si madaxbannaani iyo xornimo leh kaga doodaan qaabka siyaasaded ee qaran oo bedeel u noqon karaa qaabkii dawladda mideysan ee awooddu uruursanayd dawladda dhexe ee guul-darraystay. Laakin waxaa jirtey in shaqsiyaad Soomaaliyeed oo dagaalka sokeeye xunuunkiisu saamayn ku yeeshay ay arrinta la bodeen ayagoon ummadda ka haysan wakiilnimo, dabadeedna ay kula taliyeen beesha caalaamka in Soomaaliya lagu taageero sidii ay u qaadan lahayd qaabka dawladeed ee federaaliga ah. Sidaas darted, Uururka Qaramada Midowbay (UQM) iyo Uururka Midowga Yurub, ayagoo ka wakiil ah Soomaalida, waxay isku xilqaameen inay magacaabaan isla markaana maalgaliyaan qubara’a (aqoonyahanno) u dhashay Yurub inay dersaan soona jeediyaan qaab dawladeed Soomaaliya ku habboon kuwaasoo taladoodii ku soo jeediyey 1995tii bug-yaraha la yiraahdo ‘Deraasadda Qaabka Siyaasadeed Baahsan ee Soomaaliya – Liis Kala doorasho’ (3) Buuggaas qaabab badan oo uu tilmaamayo waxa ugu muhiimsan afarta qaab dawladdeed oo kala ah; konfeedereyshan, feedereyshan, qoqob-beeleed (consociation) iyo qaab dawlad mideysan ee awooddu baahsan tahay (decentralised unitary government).
Aniga waxay ila tahay, qaababka konfeedereyshanka, feedereyshanka iyo qoqob-beeleedku waa fikrado iyo waay-aragnimo qolaad aan Soomaalidu baahi u qaban kana hirgali karin duruufta ummaddooda taasoo ah mid dhinac kasta ka mideysan aynan ka jiirin duruafaha kala duwanaansho jisadeed, dhaqameed, diineed iyo afeed oo ay dhashaan qaababkan kor ku xusan. Laakiin, anigoo maanka ku haya arrinta gooni-isu-taagga ama goosiga Somaliland iyo dareenka mamul-gobolledyada kale ee doonaya qaab-dawladeed feederaaliga, waxaan jeclahay inaan doodo iyo is-barbardhiig ku sameeyo qaab-dawladeed mideysan ee awooddu baahsan iyo qaab federaaliga anigoo samaynaya liis is-barbardhigya faa’iidada iyo faa’do la’aanta labadan qaab marka laga eego dhinacyada dhaqangalka iyo ku-habboonaanta mid waliba u yeelan karo Soomaaliya iyo duruufaha bulsho-dhaqaaleed iyo siyaasadeed ee u gaarka ah anigoo maanka ku haya xaqiiqooyinka iyo is-bedeladda siyaasadeed ka dhashay Sooomaaliya 19kii sano ee ugu dambeeyey.
3.1.: Faai’iidooyinka iyo Arrimaha ka hor-imaan kara qaab
Dawlad Mideysan ee Awooddu baahsan Tahay
Qaab-dawladeedka mideysan ee awooddu baahsan tahay wuxuu yeelan kara faa’iidoyin iyo arrimo ka hor-imaan kara sida kuwa hoos ku xusan. Faa’iidooyinka qaab-dawladeedka mideysan ee awooddu baahansan tahay: b) midnimada bulshadeed, diimeed, afeed iyo dhaqameed ee ummadda Soomaaliyeed; t) boqolkiiba 60-70% daweynaha miyiga ee an weli degin oo noloshoodu ku xiran tahay dhul ay wadaagaan oon xududuud lahayn; j) hirgalinta dib-u-dhiska iyo xididaysiga dawlad dhexe ee xoog leh iyo ha’adaheeda; x) suuragalinta gaashaandhig iyo difaac qarameed ee xoog leh; kh) siyasaad mideysan ee arrimaha muwaadinnimada iyo socdaalka; d) siyaasad qarameed ee dhaqaalaha iyo lacagta; iyo r) siyaasad dibadeed qarameed ee mideysan.
Arrimaha ka horr-imaan kara qaab-dawladeedka Mideysan ee awooddu baahan tahay: b) Gooni-isu-tagga ama goosiga Somaliland iyo dareenka feederaaliga ee ay qabaan gobollo kale; t) qalalaasaha, murugsanaanta iyo walaaaca ka oogan gobollada koonfurta iyo bartamaha kuwaas oo rasmi ahaan ku sugan qaab-maamuleedkii dawladdii hore; x) la’aanta horseed siyaasadeeed ee abaabulan ee heer qaran waqtigan la joogo; iyo kh) faragalin iyo saamayn shisheeye oo xad-dhaaf ah ee dano leh.
3.2.: Faa-iidooyinka iyo Arrrimaha ka hor-imaan ka Qaabka feederaaliga
Qaabka Feederaaliga ahi wuxuu yeelan karaa faa-iidooyinka iyo arrimo ka hor-imaan kara sida kuwa soo socda. Faa’iidada qaabka feederaaliga: b) tixgelin iyo daweyn goosiga Somaliland iyo dareenka feederaaliga ee ay qabaan gobollo kale. Arrimaha ka hor-imaan kara qaabka feederaaliga: b) midnimada bulshadeed, diimeed, afeed iyo dhaqan ee ummadda Soomaaliyeed; t) khatar ku timaadda difaaca iyo gobanimada Ummadda Soomaaliyeed; j) boqolkiiba 60-70% daweynaha miyiga ee an weli degin oo noloshoodu ku xiran tahay dhul ay wadaagaan oon xududuud lahayn; x) qalalaasaha, murugsanaanta iyo walaaaca ka oogan gobollada koonfurta iyo bartamaha kuwaas oo rasmi ahaan ku sugan qaab-maamuleedkii dawladdii hore; kh) jiritaan la’aanta duruufaha saldhigga u ah qaabka feederaaliga sida jinsiyado, diimmo, dhaqamo iyo afaf kala gedisan; d) la’aanta horseed siyaasadeeed ee abaabulan ee heer qaran waqtigan la joogo; iyo r) faragalin iyo saamayn shisheeye oo xad-dhaaf ah ee dano leh.
Anigoo ku xisaabta ku daraya in xanuunka, lab-la-kaca iyo kalsooni-darrada ka dhalatay dagaalka sokeeye ay meesha ka bixi doonaan mustaqbalka iyo jiritaan la’aanta duruufaha saldhigga u ah qaabka feederaaliga dhisan jinsiyado, diimo, dhaqamo iyo afaf kala gedisan; waxay ila tahay in qaab-dawleedka mideysan ee awooddu baahsan kaasoo leh maamul-goboleedyo leh awooddo dastuurka qaranku damaanad qaaday ee goboladaasi doortaan goleyaashoda sharci-dejinta, iyo hogaamiyeyashooda siyasadeed. Qaabkan dawladeed waa midka ku habboon kana dhaqangali kara Soomaaliya ee suuragalin kara sidii dib loogu dhisi lahaa qaran Soomaaliyeed ee awood xooggan iyo haybad leh. Hayesheee, anigoo maaanka ku haya xalaadda goosiga Somaliland iyo dareenka feederaaliga ee gobollada kale, qaabka feederaaligu wuxuu noqon kara mid Soomaalidu ka doodo tixgelinna siin karto dabadeedna ku heshiiyaan doorashada iyo hindisaadda qaab dawladeed iyo dastuurkiisa ay wadaagaan.
Qaabku midkuu ahaadaba, waa in tiro ballaaran ee horseedka bulsho-siyasadeed ee Soomaalidu sida siyaasiyiinta, aqoon-yahannada, hoggaamiyayaasha diinta iyo dhaqanka, kuwa bulshada ee gudaha iyo dibadda ay ka yeeshaan doodo dhab ah ee qoto-dheer kuna sallaysan aqoon, waayo-aragnimo iyo xog-ogaalnimo ayadoo mulkiyadda dooddaas, meelaha iyo habka ay dhacayaan ayagu iska leeyihiin. Qaabka dawladeed iyo dastuurku waa ayan noqon kuwo ay ummadda dusha ka saaraan dawlado shisheeye gaar ahaan kuwa deriska ee danaha ka leh Soomaaliya laakiin waa in qaab-dawleed iyo nuxurka dastuurkuba noqdaan kuwo Soomalidu hindistay kuna heshiiyeen oo tarjumaya danaha iyo ayaatiinka ummaddooda iyo duruufeeda gaar sida diinta, dhaqanka iyo heerkeeda bulsho-dhaqaale.
Beesha caalamka sida dalalka carabta gaar ahaan kuwa Khaliijka, Midowga Yurub, Maraykanka, waxaa looga baahan yahay inay siiyaan taageero fududeyn maaliyadeed, farsamo, aqoon, iyo ta’kuleyn geedi socodka nabadeed, dib-u-heshiisiinta iyo dastuur dejinta ayadoo isu-duwidda ay hoos imaanayso Ururka Qaramada Midoobay keliya iyo maamulada Soomaaliyeed oo is-kaashanaya ayadoo isla markaa laga ilaainayo faragelinta xooggaga shisheeye ee dano leh ee ku tartamaya Soomaliya. Ugu dambaynta, qaab-dawleedka iyo dastuurka lagu heshiiyo waa inay noqdaan kuwo loo bandhigo afti dadweyne ee heer qarameed si ay yeeshaan sharciyad qaanuuneed iyo nuxur dimoqoraadiya.
Ugu dambaynta, waxaan jeclahay inaan fursaddan ugu hambalyeeyo Wakiilka Gaar ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaalya Mudane Axmedow Wold-Cabdalla, qabanqaabinta shirkan iyo dadaalkiisa aan kala-go’a lahayn ee la xiriira dib-u-heshiisiinta dhinacyada iska-horjeedaya ee Soomaalida gaar ahaan heshiiskii ay Jabuuti ku gaareen Dawladda feederaaliga ee Ku-Meel-Gaarka iyo Is-bahaysiga Dib-u-Xorraynta Soomaaliya. Waxaan sidoo kale mahadcelin iyo abaal kal iyo lab aan u jeedianaya Mudane Cismaaciil Cumar Gheelle, Madaxweynaha, Xukuumadda iyo shacbiga Jamhuuriyadda Jabuuti taageerada joogtada ee walaalnimo ee aan hagarta lahayn ee ay u fidiyaan dadka Soomaaliyeed sannadihii ay ku jireen qalalaasaha siyaasadeed iyo martigalintii geedi-socodka nabadeeed ee Qaramada Midoobay hoggaaminayaan iyo kuwa kale ee xiliyadii la soo dhaafay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa Dawlada Keenya ee dalkeeda ku martigalisay shirkan.
Murray Forsyth, Union of States, 1981, p2.
Idem in p.2 quotes G.f. Sawyer
Dr. I. M. Lewis et al, A Study of decentralised political structures for Somalia – A Menu of Options -1995.